नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा जुन किसीमले विकास हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार विकास भएको छैन : प्रध्यापक डा. शाक्य - Yatra Daily
Home Uncategorized नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा जुन किसीमले विकास हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार विकास भएको...
नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा जुन किसीमले विकास हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार विकास भएको छैन : प्रध्यापक डा. शाक्य
स्व. गोपाल बहादुर शाक्य र देवामाया शाक्यका तीन जना छोरा मध्ये कान्छो छोरा हुन् डा. दीपक शाक्य ।वीरगन्जवासीको लागि नयाँ नाम भने पकै होइन । ५ जना दिदी बहिनीमा एक जना म भन्दा कान्छी बहिनी छन् । अरु मभन्दा जेठी दिदीहरु र अरु दाइ हुन् उनले भने । बाजेको पारिवारिक अवस्था राम्रो भए पनि विभिन्न कारणले बुवाको पालामा हाम्रो पारिवारिक अवस्था समान्य थियो । म समान्य पारिवारिक अवस्थामा हुर्केको हुँ । पढाइमा अति उच्च श्रेणीको नभए पनि तेस्रो चौथो हुँदै २०३३ सालमा वीरगंजको माईस्थान विद्यापीठबाट एस एल सी पास गरेका डा. शाक्यको जन्म २०१७ साल चैत्र २० गते भएको बताए । मगद युनिभरसिटी गया, भारतबाट पि एच डि गरेका डा. शाक्यले पढने क्रममा आफु शिक्षक बन्छु भनेर कहिले नसोचेको उनले बताए । सुरुमा डाक्टर वा ईन्जिनियर बन्ने सोचेको थिए । तर एस एल सी पश्चात पारिवारिक अवस्थाका कारण व्यवस्थापन संकाय पढे । उनले थपे, व्यवस्थापन संकाय पढ्ने बेलामा पनि म म्यानेजर बन्ने सोचेको थिए । तर म शिक्षण पेशामा लागें र त्यसैबाट आज यहाँ पुगेको छु । २०४३ सालदेखि ठाकुरराम बहुमुखि क्याम्पसमा पढाईरहेको छु । विगत १७/१८ बर्ष यता साथीहरु मिलेर वीरगन्जमा वीरगन्ज पब्लिक कलेजको नामले अर्को नीजि विद्यालय पनि संचालन गर्दै आएका छौं । यसमा पनि विद्यार्थीको भविष्य राम्रो बनाउन प्रयासरत छौं । शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर लागि रहेका उनै डा.शाक्यसँग गरेकाे कुराकानी :
Previous articleबेटि पढई बेटी बचाऊ अभियन सार्थक बनाउन तयारी तिब्र, सासद यादवद्वरा कमिटि गठन
Next articleभारतको घोडासहनमा नेपाल भारत मैत्री संवाद कार्यक्रममा सासद यादव सम्मानित